အချိန် တစ်ပတ်လောက် နဲ့ စာအပိုင် ကျက်နည်း - Bees Media Myanmar
အချိန် တစ်ပတ်လောက် နဲ့ စာအပိုင် ကျက်နည်း 🙄😎📝
စာမေးပွဲကလည်း နီးသထက်နီးလာပြီ ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း hyper တွေကတော့ စာတွေ ပိုင်ပြီး revision ပြန်နေကြပြီ ။ ကို်ယ့်မှာ ခုမှ စတုန်း ခုမှ စတော့မယ်လို့ ကြံတုန်းရှိတဲ့သူတွေ ဒီထက်လည််း အခြေနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ စာကျက်ဖို့ ပြင်ဆင်မလဲ ? မဖြစ်မနေ လုပ်သင့်တဲ့ study tips လေးတွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
၁. ကျက်ရမယ့် စာတွေ အကုန်စုပါ။ Note ထုတ်ပါ ။ 📝
စာမေးပွဲဖြေရတော့ပါမယ် ဆိုမှ စာတွေ မရှိနေလို့ မဖြစ်ဖူးလေ စာတွေ လိုက်မေးရမယ် ၊ မိတ္တူတွေ ဆွဲစရာ ရှိတာဆွဲလိုက်တော့ ။ အရေးကြီးဆုံးက ဘယ်ဘာသာမှာ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ Note လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင် ခေါင်းစဉ်လေးတွေ ရေးပြီး သီးသန့် မှတ်ထားလိုက်ပါ။ ဥပမာ english စာဆို Grammar တွေ ချရေးမယ်။ ကျက်စာတွေဆို ခေါင်းစဉ်တွေချရေးပြီး တွက်စာတွေဆိုရင် ပုံသေနည်းတွေ အရင်ချရေးပါ။
၂. Plan ဆွဲပါ။ Schedule လုပ်ပါ။ 📖
အဓိကက ရက်ပိုင်းအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကိုယ်ဘယ်ဘာသာတွေ အပြီးဖြတ်နိင်မလဲဆိုတာ ကြိုတင်ပြီး စီစဉ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ။ စာတွေ ဘယ်လောက်များလဲ ကိုယ်ဒီရက်မှာ ဘယ်အခန်းကို တွက်နိုင်မလဲ ? ဘယ်နှစ်ပုဒ် ကျက်နိုင်မလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ စီစဉ်ပြီး Schedule ဆွဲလိုက်ပါ။
၃. ဖုန်း လုံးဝမသုံးပါနဲ့ ။ 📱❌
ဒီအချက်ကတော့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ဆိုင်တယ်။ တချို့ကတော့ ဖုန်းလုံးဝမသုံးဘဲ စာကျက်ဖို့ လုပ်တယ် ( မကျက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ခုမှ သိတာကိုး ) ။ တချိ့တွေကတော့ ချင့်ချိန်တယ် စာလုပ်ပြီးမှ ဖုန်းသုံးတယ်။ ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ တစ်နေ့တာ plan လေး ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အေးဆေး ဖုန်းသုံးလို့ရတာပေါ့ ။
၄. မနက် စောစောအိပ်ရာထပါ။ 🙂
စာစလုပ်တော့မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီ မလား ? သင့်ရဲ့ ပထမနေ့ရက်ကို မနက် ၆ ခွဲက စလို့ အိပ်ရာထလိုက်ပါ။ မနက်ခင်း ဦးနှောက်က ကြည်လင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်အားအနည်းဆုံး ဘာသာရပ်ကို အရင်ဆုံး လုပ်လိုက်ပါ။ ကျက်စာအားနည်းရင် ကျက်စာကျက် တွက်စာအားနည်းရင် တွက်စာကို အရင်တွက်ကြည့်ပါ။
၅ . သီးသန့်နေရာရွေးပါ။ 💛
စာလုပ်မယ့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် အဓိကလိုအပ်တာ စာကျက်မယ့်နေရာပါ။ အိ်မ်မှာဆိုလည်း ဆူဆူညံညံမဖြစ်စေမယ့် နေရာ၊ ဒါမှမဟုတ် အခန်းလေးတစ်ခန်းမှာ ကျက်ဖို့လုပ်ပါ။ ကိုယ့်စာကျက်နေချိန် အနှောက်ယှက်မပေးနိုင်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ တွက်စာတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ နားထဲ နားကြတ်ကောက်တတ်ပြီးတော့သာ စာတွက်လိုက်ပါ။ ကျက်စာကျက်မရရင် ရေချိူးခန်းထဲသာ ဝင်ကျက်ပါ။ ( မကျက်ဖူးရင် ကျက်နော် သရဲကြောက်တတ်ရင်တော့ မသိဖူး )
၆. အာရုံစိုက်ပါ။ 📂🙇‍♀️
စာတစ်ပုဒ်ကို တွက်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျက်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်မလဲ ? မိနစ်လေးဆယ်အတွင်း Alarm ပေးထားပြီး ကျက်လိုက်ပါ။ စာလုပ်နေချိန်မှာ အာရုံမပျံ့ဖို့ လိုအပ်တယ်နော်။ အချိန်ကို သတ်မှတ်ပြီး စာကို မှတ်နိုင်စွမ်းတိုးတတ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ သင် ဦးနှောက်မကောင်းတာမဟုတ်ပါဖူး သင်အာရုံတွေ လွင့်နေလို့ တစ်ပုဒ်ကျက်ရင် တစ်ရက်လောက်ကြာတာပါ။
တချို့တွေက စာလုပ်ပြီဆို ခေါင်းထဲ ထည့်လို့ရသမျှ အကုန်ထည့်ပြီး ကျုံးလုပ်ကြတာ ရှိတယ်။ ဒီလို စာလေ့လာတာတွေက အခုချိန် ရပြီး နောက်နေ့ တွေ မေ့သွားနိုင်တယ်။ ပုံမှန် ဦးနှောက်က မှတ်နိုင်ရည်စွမ်းက သုံးနာရီလောက်လို့ယူဆကြတယ် ။ ဒီ Limit သူထက်ကျော်တယ်ဆိုရင် လုပ်သမျှစာတွေ မေ့နိုင်ဖို့ အလားလာရှိမှာပဲ။ အဲ့တော့ ခဏလေး အနားပေးလိုက်ပါ။ ကို်ယ်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်ဖြစ် နားထောင်ပါ။ relax ဖြစ်စေပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ ငါဘာတွေကျက်ပြီးပြီးလဲ တွက်ထားတာတွေ မရတာများရှိနေလား ကိုယ့်ကိုကိုယ် တစ်ချက် စစ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်နေ့တာ လုပ်သမျှစာတွေကို မအိပ်ခင် revision ပြန်ကြည့်ပါ။ မရတဲ့စာရှိလည်း နောက်နေ့သင်လုပ်ဖို့အတွက် မှတ်ထားပေးပါ။
၉. အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ ။ 🌃
အိပ်ရေးဝဝအိပ်ဆိုတာ ည ၁ နာရီလောက်မှ အိပ်ပြီး မနက် ၉ လောက် အိပ်ရာထ စာလုပ်တာကို ပြောတာမဟုတ်ပါဖူး။ ညဘက်ကို ၁၂ နာရီမတိုင်ခင် အိပ်စက်အနားယူပေးပါ။ ဒါမှ မနက်ခင်းမှာ အိပ်ရေးဝပြီး စိတ်ကြည်လင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် အကျိုးရှိရှိ နည်းလမ်းတွေ ပေးနိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ် ။ယောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မျှဝေပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ 😍😘
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားကွင်းသွားဖို့Taxi ခ ၈၀၀၀ ကုန်စရာမလိုတော့ပါဘူး
ကိုယ့်ကားကိုယ်စီးပြီး အစိုးရအလုပ်လာလုပ်ရခြင်းဟာ သဘာဝမကျကြောင်းပြောဆိုလိုက်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်